Securities Account Opening and Dematerialization of MTSH Shares | CB Securities
Securities Account Opening and Dematerialization of MTSH Shares
CB Securities Limited, as appointed from Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited (MTSH), now acting as an underwriter for MTSH to bealisted company on Yangon Stock Exchange (YSX). For shareholders of MTSH, who would like to trade securities on YSX and receive dividend in the future:
Shareholders need to openasecurities trading account and
All the physical share certificates needed to be dematerialized for Scripless Electronic System.
Both opening securities trading account and dematerialization of share certificates into Scripless Electronic System can be done in CB Securities Head Office and mentioned CB Bank Branches throughout the Republic of the Union of Myanmar starting from 25th February 2016.
Not only for MTSH shareholders, CB Securities Limited offer securities trading account opening also for the individual and corporates investors (except non-Myanmar nationalities) who would like to trade securities listed on YSX.
Requirements to openasecurities trading account
For individual and joint account
Original National Registration Card (NRC) + Copy
Copy of family registration list
Letter of Authority to representative
Original NRC of representative + Copy
Bank account number and name of the bank
For corporate trading account
Copy of Form VI, Form XXVI and Form E
Original board resolution (including decision to openasecurities trading account and the authorized persons to operate the account)
Original NRC of authorized account operators + Copy
Dematerialization Request (Scripless Electronic System)
Original NRC of shareholder + Copy
CB Securities Limited Head Office - #03-04, Union Financial Center, Corner of Mahabandoola Road & Theinphyu Road, Yangon, Myanmar. Tel: +95 1 8610309-13, 8610331-35, Fax: +95 1 8610314,8610330
Yangon- CB Bank Head Office (01-372646, 372655), Theinphyu (UFC) Branch, Myanmar Plaza Branch, Sayar San Branch (01-559006, 559633), Shwe Pone Nhyat Branch (01-531493), Lanmadaw 6th Street Branch (01-2301675, 2301676), Thingangyun Branch (01-8551282), Sanchaung (Bagaya) Branch (01-2304893, 2304894), Thanlyin Branch (056-23004~23306), Kyike Wine Branch.
Mandalay Division- 26th Street Branch (02-67184,67185), Manawhari Branch (02-82191, 82192), Pyin Oo Lwin Branch (085-28405, 28404), Moegoke Branch (086-20525, 21160).
Naypyitaw- Oattra Thiri Branch (067-417848), Lawe Branch (067-30971, 30972).
Ayeyawady Division- Pathein Branch (042-23617, 23618), Myaungmya Branch (042-70825, 50529), Maubin Branch (045-30225), Bogalay Branch (045-45106,45420), Nyaungdone Branch (046-20029,20030).
Bago Division- Bago Branch (052-22374, 22375), Pyay Branch (053-25644, 27845), Taunggoo Branch (054-23914, 23915), Phyu Branch (054-40847, 40852), Nyaunglaybin Branch (052-50472, 50473).
Sagaing Division- Sagaing Branch (072-22934, 22933), Monywa Branch (071-26183), Kale Branch (073-22798, 22799, 22800).
Shan State- Taunggyi Branch (081-202012, 202013, 202014), Lasho Branch (082-26749, 26750), Muse Branch (082-52544, 52545).
Kayin State- Hpa-an Branch (2) (058-23357), Myawady Branch (058-5130, 51308).
Tanintharyi Division- Myeik Branch (059-42645), Dawe Branch (Sibin Zay) (059-23220, 24075).
Magway Division- Magway Branch (063-28570, 28679), Pakokku Branch (062-22479, 22489).
Kachin State- Bamho Branch (074-51319, 51320).
Kaya State- Loikaw Branch (083-22980, 22439).
ယခုအခါ မြန်မာသီလ၀ါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုး(လ်)အင်း(စ်)ပတ်ပလစ်လီမိတက် (Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited - MTSH) အား ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း (Yangon Stock Exchange) တွင် စာရင်းဝင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်များကို CB Securities Limited မှ Underwriter အဖြစ် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း (Yangon Stock Exchange) တွင် အစုရှယ်ယာ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် နောက်နောင် အမြတ်ဝေစုလက်ခံရရှိစေနိုင်ရန်အတွက်
၁) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ၀ယ်ရောင်းစာရင်း (Securities Trading Account) ဖွင့်လှစ်ရန်နင့်
၂) မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်အစုရှယ်ယာ လက်မှတ်များကို အစုရှယ်ယာသက်သေခံလက်မှတ်စာရွက် မလိုအပ်သောစနစ် (Scripless Electronic System) သို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။
အထက်ပါလိုအပ်ချက် (၂) ရပ်အား CB Securities Limited က ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့မှစ၍ အောက်ဖော်ပြပါ CB Securities Limited ရုံးချုပ် နှင့် CBဘဏ်၏ မြန်မာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိဘဏ်ခွဲများတွင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
MTSH ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များသာမက ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် အစုရှယ်ယာအရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားသော အခြားမည်သူမဆို (နိုင်ငံခြားသားများမှအပ) CB Securities Limited တွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ၀ယ်ရောင်းစာရင်း (Securities Trading Account)ကို CB Bank သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ်ခွဲများတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
CB Securities Limited ရုံးချုပ် - #၀၃-၀၄, Union Financial Center, မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း : ၀၁-၈၆၁၀၃၀၉ - ၁၃, ဖက်စ် : ၀၁ - ၈၆၁၀၃၃၀၊ ၀၁-၈၆၁၀၃၁၄ အီးမေးလ်: contact@cbsecurities.com.mm
Account ဖွင့်လှစ်နိုင်သော CB Bank ဘဏ်ခွဲများ
ရန်ကုန်မြို့တွင် CB Bank ရုံးချုပ်၊ သိမ်ဖြူ (UFC) ဘဏ်ခွဲ၊ မြန်မာပလာဇာဘဏ်ခွဲ၊ ဆရာစံဘဏ်ခွဲ၊ ရွှေပုန်းညက်ဘဏ်ခွဲ၊ လမ်းမတော် (၆) လမ်းဘဏ်ခွဲ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းဘဏ်ခွဲ၊ စမ်းချောင်း (ဗားဂရာ)ဘဏ်ခွဲ၊ သန်လျင်ဘဏ်ခွဲ နှင့် ကျိုက်ဝိုင်းဘဏ်ခွဲ။
မန္တလေးတိုင်းတွင် ၂၆လမ်းဘဏ်ခွဲ၊ မနော်ဟရီဘဏ်ခွဲ၊ ပြင်ဦးလွင်ဘဏ်ခွဲ နှင့် မိုးကုတ်ဘဏ်ခွဲ။
နေပြည်တော်တွင် ဥတ္တရသီရိဘဏ်ခွဲ နှင့် လယ်ဝေးဘဏ်ခွဲ။
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် မြောင်းမြဘဏ်ခွဲ၊ မအူပင်ဘဏ်ခွဲ၊ ဘိုကလေးဘဏ်ခွဲ၊ ညောင်တုန်းဘဏ်ခွဲ၊ ပုသိမ်ဘဏ်ခွဲ။
ပဲခူးတိုင်းတွင် ပဲခူးဘဏ်ခွဲ၊ ပြည်ဘဏ်ခွဲ၊ တောင်ငူဘဏ်ခွဲ၊ ဖြူးဘဏ်ခွဲ၊ နှင့် ညောင်လေးပင်ဘဏ်ခွဲ။
စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် မုံရွာဘဏ်ခွဲ၊ စစ်ကိုင်းဘဏ်ခွဲ နှင့် ကလေးဘဏ်ခွဲ။
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် လားရှိုးဘဏ်ခွဲ၊ တောင်ကြီးဘဏ်ခွဲ နှင့် မူဆယ်ဘဏ်ခွဲ။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဘားအံဘဏ်ခွဲ(၂) နှင့် မြ၀တီဘဏ်ခွဲ။
တနသာင်္ရီတိုင်းတွင် မြိတ်ဘဏ်ခွဲ နှင့် ထားဝယ်ဘဏ်ခွဲ(စည်ပင်ဈေးဘဏ်ခွဲ)။
မကွေးတိုင်းတွင် ပခုက္ကူဘဏ်ခွဲနှင့် မကွေးဘဏ်ခွဲ။